Doogee S98 Pro- အပူအာရုံခံကိရိယာနှင့် ဂြိုလ်သားဒီဇိုင်း | သတင်း ဂက်ဂျက်များ
Ignatius ခန်းမ | 26/04/2022 15:10 | အဆင့်မြှင့်တင် 27/04/2022 09:03 | မိုဘိုင်း, တယ်လီဖုန်း
Doogee S98 ကိုတင်ပြပြီးနောက်၊ ကုမ္ပဏီသည် တူညီသောကိရိယာ၏ Pro ဗားရှင်းဖြစ်မည့်အရာကို လုပ်ဆောင်နေသည်။ ငါတို့အကြောင်းပြောနေတာ Doogee S98 Pro ကို အလွန်တိကျသောကဏ္ဍနှစ်ခုတွင် S98 နှင့်ကွာခြားသည့်ကိရိယာ။
တစ်ဖက်တွင်၊ ဒီဇိုင်း၊aဂြိုလ်သားစိတ်ကူးယဉ်ဒီဇိုင်း စက်၏နောက်ဘက်တွင်၊ ဂြိုလ်သားများ၏ဂန္ထဝင်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆွဲဆောင်သည့်ကင်မရာ module ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောလိုင်းများဖြင့်ပံ့ပိုးထားသောဒီဇိုင်း။
ဒီဇိုင်းကို ချန်ထားခဲ့ကာ ပုံမှန်ဗားရှင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကွဲပြားသော အချက်တစ်ချက်မှာ ၊ အပူမှန်ဘီလူး ဘာတွေပါဝင်လဲ။ 48 MP ပင်မအာရုံခံကိရိယာနှင့် 20 MP ညမြင်ကွင်းအာရုံခံကိရိယာအပြင်၊ ဤကိရိယာ၏တတိယမြောက်မှန်ဘီလူးတွင် အပူပေးသည့်အရာမှန်သမျှကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်စေသည့် အပူအာရုံခံကိရိယာပါရှိသည်။
The thermal lens တွင်ainfi ray အာရုံခံကိရိယာ အပူပေးသည့်အရာများကို ထောက်လှမ်းရန်နှင့် အလွန်တိကျသောစျေးကွက် niches များပါရှိသော အရာများကို ထောက်လှမ်းရန် ရည်ရွယ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများထက် မြင့်မားသော resolution ဖြင့်။
ဤမှန်ဘီလူးမှ ရုပ်ပုံကြိမ်နှုန်း 25 Hz ကို အသုံးပြုသည်။ အပြတ်သားဆုံးပုံများကိုရယူပါ။ စိုထိုင်းဆ၊ ရေယိုစိမ့်မှု၊ မြင့်မားသော အပူချိန်၊ လေစီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသော ဆားကစ်များကို ရှာဖွေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
Double Spectrum Fusion algorithm ကြောင့်၊ စက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခွင့်ပြုသည်။ ပင်မအာရုံခံပုံများကို ထပ်တင်ပါ။ အပူပေးသော အရာဝတ္ထုများကို ထောက်လှမ်းရန် အသုံးပြုသည်။
ဤနည်းဖြင့်၊ သုံးစွဲသူသည် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဆင့်ကို ချိန်ညှိပါ။ ဆန္ဒရှိ၍ ပြဿနာရှိမည့်နေရာကို ရှာဖွေပါ။
ကုမ္ပဏီသည် Doogee S98 Pro ကို ဈေးကွက်တွင် ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားသည်။ ဇွန်လ၏အစ. အကယ်၍ သင်သည် ဤစက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ပိုမိုရယူလိုပါက၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်မည့် သတ်မှတ်ချက်အားလုံးကို သိရှိသည့်အပြင် Doogee ဝဘ်ဆိုက်တွင် ကြည့်ရှုရန် သင့်ကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ S98 Pro ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » Doogee S98 Pro- အပူအာရုံခံကိရိယာနှင့် ဂြိုလ်သားဒီဇိုင်းဖြင့် ကင်မရာ